✨✨ Salagadoola menchicka boola Bibbidi-bobbidi-boo ✨✨ Cinderella လေးကို မှော်အစွမ်းနဲ့ ဝင်းလဲ့တောက်ပသွားအောင် ပြောင်းလဲလိုက်သလိုမျိုး သင့်ရဲ့ အသားအရေကိုလဲ ဖြူစင်ဝင်းပသွားအောင် ပြောင်းလဲပေးမယ့် မှော် Set လေး ရှိတယ်နော် 😉 အဲ့ဒါကတော့ ✨ New Skiin Foam Cleanser Vitamin C ✨ Garnier Vitamin C Super Essence ✨ Snail Whitening Cream တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အသုံးပြုပေးခြင်းအားဖြင့် တင်းတိတ်၊ မှဲ့ခြောက်၊ အမဲစက်များ၊ ဝက်ခြံကြောင့်ဖြစ်သော အမဲစက်၊ အမာရွတ်များကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ အသားအရေ မဲညစ်ခြင်းကို သက်သာလာစေပြီး အသားအရောင် ညီညာဖြူဝင်းလာစေပါတယ်။ မှော် Set လေးနဲ့ သင့်အသားအရေကို အခုပဲ ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။ New Skiin Foam Cleanser Vitamin C (150g) တစ်ဘူး - ၉,၅၀၀ ကျပ် Garnier Vitamin C Super Essence (30 ml) - ၁၂,၀၀၀ ကျပ် Snail Whitening Cream (50 g) တစ်ဘူး - ၂၉,၅၀၀ ကျပ်
ချောချောချေတို့ ပြောနေတဲ့ ဂါဂါ ခရုဆိုတာဘာလဲ ? 🍋🍋🐌 ဂါဂါဆိုတာ Garnier Light Complete White Speed Vitamin C Super Essence ဖြစ်ပြီး ခရုဆိုတာ Snail Wish Whitening Cream ပါ ဂါဂါလေးကို ပုံမှန်လိမ်းပေးရင် တစ်ပတ်အတွင်း အသားအရောင် ညီညာ ဖြူဝင်းလာစေခြင်း၊ နှစ်ပတ်အတွင်း ဝက်ခြံအမာရွတ်များ ပျောက်ကင်းစေခြင်း၊ တစ်လအတွင်း အမဲစက်များ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မှေးမှိန်သွားစေပါတယ်။ ခရုလေးကတော့ Snail Mucus က အရေပြားကို အပြည့်အဝဆုံး အာဟာရဓါတ်နှင့် အစိုဓါတ်ကို ဖြည့်တင်းပေးခြင်း၊ အသားအရေတင်းရင်းမှုအတွက် အဓိကလိုအပ်သော ကော်လာဂျင်ပြည့်ဝစွာ ထည့်သွင်းပေးထားသောကြောင့် အရေးအကြောင်းများကို သိသာစွာ ပျောက်ကင်းစေ ပြီး အသားအရေကို တင်းရင်းနုပျိုစေခြင်း၊ အသားဓါတ်နှင့် Vitamin များက အရေပြား အသစ်ဖြစ်ပေါ်မှုကို အားပေးပြီး အိုမင်းပျက်စီး နေသောအရေပြားဆဲလ်များကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း အစွမ်းထက် ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများ ပါဝင်တာကြောင့်အရေပြား အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး အမည်းကွက်၊ အမည်းစက်များ၊ ဝက်ခြံအမာရွတ်များကို ထိရောက်စွာ ဖယ်ပေးပါတယ်။ ဂါဂါခရုကြောင့် ပြစ်မျိုးမှည့်မထင် အလှတရားကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီပေါ့ 💁‍♀️
Focus Beauty မှ ကိုးရီးယားနိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ် တင်သွင်းဖြန့်ချီသော 💎New Skiin All In One Tone Up Cream 💎New Skiin Whitening Mask 💎New Skiin Supplement 💎New Skiin Foam Cleanser 💎Better Skin Soap 💎Garnier Vitamin C Super Essence တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ FDA မှ စစ်ဆေးခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာ အသုံးပြု နိုင်ပါသည်. #FocusBeauty #NewSkiinCream #NewSkiinSupplement #NewSkiinWhiteningMask #BetterSkinSoap #GarnierVitaminCSuperEssence #NewSkiinFoamCleanser #FDAApproved
Garnier Vitamin C Super Essence အတွက် ၄ လတာ Target Trip လာပါပြီ. 2020 July လမှ Oct လအတွင်း Garnier Vitamin C Super Essence ဘူး ၂၀၀၀ ၀ယ်ယူတိုင်း ကော့သောင်းခရီးစဥ် လိုက်ပါခွင့် တစ်စောင် ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်. ဘူး ၂၀၀၀ Target ဆိုတော့ Agent တိုင်း ရရှိနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးဖြစ်လို့ ကြိုးစားကြမယ်နော်.
ကိုယ်ကြိုက်နေတဲ့ Vitamin C လေး🍋🍋 🍋🍋🍋 ရိုးရိုး Vitamin C မဟုတ်ဘူး Garnier ရဲ့ SuperEssenceVitaminC 🍋🍋 နေ့တိုင်းပုံမှန်လိမ်းပေးရင် ✅✅✅ 💛တစ်ပတ်အတွင်း မျက်နှာအသားအရေလေး သိသိသာသာညီလာတယ် 🧏 💛ဖြူတာမဟုတ်ဘူး အသားလေးဝင်းလာတာ 👸👸 💛တစ်လအတွင်း အမဲစက်၊ အမဲကွက်တွေ ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေ 30% ထိသက်သာလာတယ် 💛အရေးအကြောင်းတွေ နည်းသွားတယ် 🙋🙋‍♂️ 💛ဈေးလဲမကြီးဘူး 12000 ကျပ်တည်းပဲ 💸 မှာမယ်ဆို Cb နော် 💕 ☎☎09-963683981 #GarnierEssence
Ma Kyi Kyi Than
Focus Beauty မှ တာ၀န်ယူဖြန့်ချီသော 💎Garnier Vitamin C Super Essence 💎 သည် မြန်မာနိုင်ငံ FDA မှ FDA No. MN190118626 ဖြင့် စစ်ဆေးခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာ အသုံးပြု နိုင်ပါသည်.
မိတ္ကပ္ ထူဗ်စ္ဗ်စ္ႀကီးေတ လိမ္းၿပီး ကိုယ့္အသားအေ၇ ကိုယ္ျပန္ဖ်က္ဆီးမလို႔လား။ အာ့ အလွျပင္နည္းေတြက ႏိုင္တီးဂြမ္တီး ေမာ္ဒန္နိမ့္ခဲ့ပါၿပီ။ 2020၇ဲ႕ make up look ဆိုတာ က်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့ အသားအေရအလွကို Top up cream ေလးက ပံ့ပိုးျဖည့္စြက္ တဲ့ ပါးပါးၾကည္ၾကည္ glow & glass style ေလးနဲ႔ ဘိုဆန္ဆန္ေလး လွၾကေတာ့တာေလ။ ဒီလို အသားေလးလွဖို႔ Snail ေလးလိမ္း၊ glow ဖို႔လဲ Snail ေလးက ကူညီပါရေစတဲ့။ ကဲ ဘာလိုေသးလဲ။ ေအာ္ အမဲစက္လား ေရာ့ garnier Vitamin C Super Essence ေလး ကိုလိမ္း။ တလအတြင္း ၃၀% ေလ်ာ့ပါးေစဖို႔ အာမခံတယ္။ ၀ယ္ဖို႔ လိုအပ္လို႔ ျဖစ္ျဖစ္။ သံုးရတာ အဆင္မေျပလို႔ ေၾကာင့္ ဆိုဆို ဒီဖုန္းေလးကိုဆက္ ☎09420771491
Ma Thae Zar Htun